प्रदेश २ को सरकारमा नेकपा इन, राजपा सरकारबाट समेत आउट !| Nepal Pati
प्रदेश-२ को सरकारमा नेकपा इन, राजपा आउट !
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र संघीय समाजवादी फोरमबीच दुई बुँदे सहमति भएपछि फोरम र राजपाको गठबन्धन टुटेको छ । फोरम केन्द्रीय सरकारमा सहभागी हुनेछ भने प्रदेश २ को सरकारबाट समेत राजपा बाहिरिनेछ ।
राजपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने ‘राजपा केन्द्रीय सरकारमा सहभागी हुँदैन । प्रदेश २ सरकारबारे अवस्था के हुन्छ, त्यसपछि सोचौला । अहिले हामीले केही निर्णय लिएका छैनौँ ।’ बैठक बसेर रणनीति तय गर्ने राजपाको तयारी छ ।
फोरम पनि एकतामा आउने !
वामपन्थी पृष्ठभूमिका उपेन्द्र यादव र अशोक राई लगायत नेकपामै समाहित हुने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ । फोरम पनि नेकपामा एकीकृत भए केन्द्रीय सरकारसहित सातै वटा प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहमा नेकपाको एकल सरकार हुनेछ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमलाई नेकपामा ल्याउने अध्यक्ष प्रचण्डले विशेष पहल गरिरहेका छन् । यस अभियानमा अर्का अध्यक्ष केपी ओलीको समेत साथ प्रचण्डलाई छ ।
फोरम समेत सरकारमा सहभागी भएपछि सरकार दुई तिहाईको हुनेछ । उक्त संख्या संविधान संशोधनदेखि संवैधानिक अंगका अधिकारीलाई महाअभियोग लगाउन समेत पर्यात हो । प्रतिनिधि सभामा २७५ मध्ये नेकपामा १७५ र फोरमका १६ सांसद छन् । फोरम नेकपामा एकीकृत भए अन्य साना दललाई कांग्रेसमा एकीकृत हुन दवाव पर्नेछ । त्यस्तो स्थितिमा कम्युनिष्ट र कांग्रेस दुई शक्ति अस्तित्वमा रहनेछन् । अन्य सानातिना दल नाम मात्रको हुनेछन् ।
फोरम र नेकपाको सरकार
केन्द्रमा फोरम सरकारमा सहभागी हुने भएपछि फोरम–राजपा गठबन्धनलाई प्रदेश २ मा दिएको समर्थन नेकपाले फिर्ता लिएको थियो । नेकपाको समर्थनमा फोरमले उक्त प्रदेशमा सरकार चलाउने प्रवल सम्भावना रहेको स्रोतको दावी छ ।
प्रदेश २ मा नेकपाको ३२ सिट छ भने संघीय समाजवादी फोरमको २९, राजपा नेपालको २५, कांग्रेसले १९ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको एक सिट छ ।
5025 पटक पढिएको